प्राविधिक खटिनुपूर्व बनाइएका भूकम्प पिडीतका घरधनीलाई तीन लाख दिइने – osnepal tv
प्राविधिक खटिनुपूर्व बनाइएका भूकम्प पिडीतका घरधनीलाई तीन लाख दिइने
एककोठे घर पुनःनिर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएकोसमेत पाइएकाले मापदण्ड स्पष्ट पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आफू बस्ने घर पुनःनिर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी पनि जवाफदेही हुन जरुरी रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । यसअघि एककोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एककोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।(रासस)
Previous article विदेश नै किन रोज्छन् इञ्जिनीयरिङका उत्कृष्ट विद्यार्थी ?
Next article नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी गृहप्रवक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने दम्पती पक्राउ
विदेश नै किन रोज्छन् इञ्जिनीयरिङका उत्कृष्ट विद्यार्थी ?
नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी गृहप्रवक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने दम्पती पक्राउ